Isikhungo i-Moses Kotane Institute (MKI) Siseka Ukuthuthukiswa Kwamakhono Nocwaningo E-KZN - philanthropy@UKZN
Isikhungo i-Moses Kotane Institute (MKI) Siseka Ukuthuthukiswa Kwamakhono Nocwaningo E-KZN
Sandile Ntuli .
Isikhungo i-Moses Kotane Institute (MKI) sigcizelela kakhulu ukubaluleka kokuthuthukiswa kwamakhono nocwaningo ekuthuthukisweni komnotho.
Njengengxenye yomsebenzi waso, i-MKI ikhipha imifundaze ikahkhulukazi kubafundi asebeneziqu baseNingizimu Afrikha abahlala kwaZulu-Natal, kodwa abangabhalisa kunoma yisiphi isikhungo semfundo ephakeme eNingizimu Afrikha.
Isikhungo siwuhlaka lukahulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal ngoMnyango WezokuThuthukiswa KwezoMnotho, EzokuVakasha nezeMvelo (EDTEA). Umsebenzi walolu hlaka ukuhlinzeka ngocwaningo olusezingeni eliphezulu, ukugqugquzela ukuthuthuka komnotho nokuqhamuka nokusha esifundazweni.
Lokhu kwenziwa ngokuhlinzeka ngocwaningo olunembayo futhi oluseka intuthuko kwezomnotho enoguquko olukhulu kanye noluthinta wonke umuntu esifundazweni ezinhlakeni zikahulumeni kanye nezizimele. Uxhaso lutholakala ku-EDTEA nakwabanye ababambe iqhaza.
“Ukwesekwa kwabafundi yi-MKI kubhekiswe ekuthuthukisweni kocwaningo olukhiqizwayo esifundazweni oluxhumene nemikhakha eyisithupha okugxilwe kuyo ku-MKI. Okubalwa Ezokuxhumana Nobuchwepheshe (ICT), ezasolwandle nomnotho wasolwandle, ezokukhiqiza, ezolimo, umnotho wasemaphandleni nasemalokishini, kanye nomnotho wezemvelo.
“I-MKI iphokophele ukukhiqiza abacwaningi abasezingeni eliphezulu abazokwenza ucwaningo oluzokwazi ukuba nomthelela ekuguqukeni kwezinqubomgomo esifundazweni. Bonke abahlomule ngomfundaze balindeleke ukuba babe amanxusa e-MKI,” kusho uDkt Thembinkosi Twalo, ongumphathi wezokuthuthukiswa kwamakhono, ezocwaningo nobudlelwano ku-MKI.
Omunye wabahlomule ngomfundaze uMnu Sandile Ntuli, 22, uthe akazazi ukuthi ngabe ukuphi ukube wayengakutholanga ukwesekwa yi-MKI.
Lo mfundi wase-UKZN wonyaka wesithathu weziqu zobuNjiniyela Bamakhemikhali uthe ubonga umfundaze ngokumelekelela ukuze angakathazeki ngemali yokufunda nokuthi angalali elambile.
“Umama wami eyedwa wayengakwazi ukukhokha ngisho imali yokubhalisa. Ayekwazi ukukukhokhela kwakuyizindleko zokugibela kwami ngisuka ekhaya eMbazwana ngiya eThekwini, eNyakatho neKwaZulu-Natal budebuduze naseSodwana Bay.
“Isikhungo singilekelela ekufezeni amaphupho ami. Akulula ukuthola umfundaze ezinkampanini ikakhulukazi lapho ngiphuma khona, noma ngabe uthembisa kangakanani. Ngasebenza kanzima esikoleni samabanga aphezulu. Ngenhlanhla uthishanhloko wanginika amafomu okubhalisela umfundaze wasesikhungweni, “kusho uNtuli.
Uthe ukuthola kwakhe iziqu akukhona okwakhe kuphela.
“Ngifuna ukuthola umsebenzi ngilekelele umama, osebenza kanzima esebenzela thina. Ngifuna ukumakhela umuzi,” usho kanje.
I-MKI yasungulwa ngonyaka wezi-2007 ibizwa nge-South African National Liberation Institute of Technology, Philosophy and Political Science (SANLITPPS).
Ngonyaka wezi-2009, yabhaliswa ngokusemthethweni njengenhlangano engenzi nzuzo ngokomthetho i-Companies Act, 2008.
Isihlinzeke ngokwesekwa kubafundi abagxile emkhakheni wesayensi, nezobuchwepheshe, ezobunjiniyela nezezibalo (STEM). Yize noma ukuxhaswa kusaqhubeka, i-MKI isigxile kwezocwaningo, okuyingakho kuxhaswa imisebenzi yocwaningo ikakhulukazi yabafundi beziqu zemastazi nezobudokotela.
I-MKI inohlelo lwe- Experiential Learning Programme lapho abafundi abaneziqu beqashwa khona ukuze bathuthukise amakhono abo noma bakhuphule izinga lamakhono abo kwezocwaningo.
“Lokhu kuyinto enhle kakhulu kulabo abaxhaswe umfundaze wakwa-MKI ukuze bathole amava ezindaweni ezibalulekile ekuthuthukeni kwamakhono abo ezomsebenzi,” kusho uDkt Twalo.
Words: Taschica Pillay